Iska Illow Benzema, Modric & Alaba: Carlo Ancelotti Oo Magacaabay SADDEXDA Ciyaartoy Ee Real Madrid Ee Lama-Filaanka Ah Ee Ka Yaabiyey - GOOL24.NET
Iska Illow Benzema, Modric & Alaba: Carlo Ancelotti Oo Magacaabay SADDEXDA Ciyaartoy Ee Real Madrid Ee Lama-Filaanka Ah Ee Ka Yaabiyey
Tababaraha Real Madrid, Carlo Ancelotti ayaa magacaabay saddex ciyaartoy oo si lama filaan ah layaab ugu riday intii uu joogay Real Madrid oo uu xilli-ciyaareedkiisii koowaad ku qaadanayo, kuwaas oo uu rumaysan yahay inay yihiin sirtii ka caawisay inay kooxdu ku guuleysato horyaalka LaLiga, sidoo kalena ay yimaaddaan finalka Champions League.
Real Madrid oo Axadda booqasho ugu tegaysa Cadiz ayaa la filayaa inuu Ancelotti isbeddelo badan ku sameeyo shaxdiisa, si uu xiddigaha muhiimka ah ugu dhigto ciyaarta finalka Champions League ee Liverpool ay kula ballansan yihiin dhamaadka bishan May.
Waxa ciyaartan kusoo bilaaban doona saddexda ciyaartoy ee ka yaabiyey Carlo Ancelotti, kuwaas oo helaya fursad ay isku muujiyaan ka hor inta aanay bilaabmin isku-diyaarinta ciyaarta finalku.
Carlo Ancelotti oo warbaahinta la hadlayay ayaa la weydiiyey haddii ay jiraan ciyaartooyo kooxdiisa ah oo ka yaabiyey, waxaana uu markiiba lasoo booqday magacyada saddex laacib oo lama filaan ku noqonaya jamaahiirta, sababtuna waxay tahay in aanay ahayn xiddigaha waaweyn ee Real Madrid.
“Ma jiro ciyaartoy aan wax niyad-jab ah kala kulmay, laakiin waxa iga yaabiyey Valverde, Rodrygo iyo Camavinga oo aan moodayay inay ciyaartoodu hoosayso.” Ayuu yidhi Carlo Ancelotti.
Waxa uu kusii daray: “Lama aanan yaabin Vinicius sababtoo ah waan ogaa hibadiisa ciyaaareed, iyo in uu muujin karayo, haddana fiicnaatay dhamaystirkii, laakiin waxa iga yaabiyey Rodrygo, Camavinga iyo Valverde.”
Waxa kale oo la weydiiyey waxa uu ka odhanayo xiddiga reer Masar ee Mohamed Salah oo toddobaadkan sheegay inuu yahay ciyaartoyga ugu wanaagsan booska garabka midig ee weerarka, waxaanu Ancelotti ku jawaabay: “Salah wuxuu sheegay inuu yahay ciyaartoyga dunida ugu wanaagsan booskiisa, waanu ku saxan yahay.
“Waan ku raacsanahay hadalkiisa. Isaga ayaa ugu wanaagsan adduunyada booskiisa garabka midig.”